Monday June 04, 2018 - 07:43:51 in Wararka by Super Admin
Wararka ka imaanaya Yemen ayaa sheegaya in dagaallo culus ay ka socdaan hareeraha magaalada istiraatiijiga ah ee Al Xudeyda, isbaheysiga Sacuudiga iyo imaaraatka Carabta ay hoggaaminayaan ayaa ku dhawaaqay olole dagaaleed ay ku qabsanayaan magaalada Dekadda leh ee Al Xudeyda oo hadda ay maamulaan maleeshiyaadka Xuuthiyiinta.
Duqeymo ba'an oo ay geysanayaan diyaaradaha isbaheysiga Carabta ayaa lagasoo sheegayaa tuulooyin iyo deegaanno hoos yimaad magaalada Al Xudeyda oo ay kutaal dekadda ugu weyn wadanka Yemen ahna meesha kaliya ee lagasoo daabulo gargaarka Bani'aadanimo sida ay sheegayaan wakaaladaha wararka.
Afhayeen u hadlay ciidamada Xukuumadda maqaar saarka Cabdi Rabih Haadi Mansuur ayaa warbaahinta u sheegay in ay kusii siqayaan magaalada Al Xudeyda oo dhacda xeebaha galbeed ee Yemen.
Sawirro lagu faafiyay baraha Internetka ayaa muujinaya saanado hub ah oo ay kamid yihiin sawaariikh iyo walxaha qarxa oo laga qabtay Xuuthiyiinta, isbaheysiga Carabta wuxuu sheegay in uu gacanta ku dhigay warshado maxalli ah oo Maleeshiyaadka shiicada ay ku farsameynayeen sameynayaan walxaha qarxa iyo goobo ay ku qarsanayeen sawaariikhd Balaastigga.
Dowladda Mareykanka iyo Hay'adaha waxa loogu yeero Q.Midoobe ayaa walaac ka muujiyay dagaalka Xudeyda waxayna isbaheysiga Sacuudiga iyo Imaaraatka uga digeen qabsashada magaalada oo sababi kari in ay xiranto dekadda weyn ee Al Xudeyda.